အပြည့်အဝ turnkey စည်းဝေးပွဲကိုဝန်ဆောင်မှုလျင်မြန်စွာ-အလှည့် PCBA ရှေ့ပြေးပုံစံ BOM နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ထဲမှာရှန်ကျန်း PCBA ထုတ်လုပ်သူအတွက် SMD ပုံဆွဲ PCBA ထုတ်လုပ်သူ & အစည်းအဝေး - တရုတ်အပြည့်အဝ turnkey စည်းဝေးပွဲကိုတရုတ် Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ထဲမှာရှန်ကျန်း PCBA ထုတ်လုပ်သူအတွက် PCBA ထုတ်လုပ်သူဆွဲဝန်ဆောင်မှုလျင်မြန်စွာ-အလှည့် PCBA ရှေ့ပြေးပုံစံ BOM နှင့် SMD & ညီလာခံပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
အဆိုပါ PCBA စက်မှုလုပ်ငန်းအားကြီးသောခြုံငုံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်. အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုနည်းပညာ, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဆင့်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာကိုအလွန်အရေးကြီးလှသည်, အရာအလေ့အကျင့်များနှင့်စုဆောင်းခြင်းများအချိန်ကြာမြင့်စွာလိုအပ်သည်.
1.6 အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် Smt ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့် DIP ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, အလျှော့ပေးလိုက်လျော-မြင့်မြင့်မားတိကျစွာကိရိယာများ;
3.High-end ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်, အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများများအတွက် High-end ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုများအတွက် channel များကိုပေး, ကယ်တင် 20% သည်အခြားပရိုဆက်ဆာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကုန်ကျစရိတ်၏
တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB2အလွှာ 1oz PCB HASL ခဲအခမဲ့ရိုးရှင်းသောနှစ်ဆ panel ကို PCB.
TG170 မြင့်မားသော TG ဘုတ်အဖွဲ့ ENIG 3U "PCB ရှေ့ပြေးပုံစံ ul တင်းကျပ် IPC လမ်းညွှန်ချက်များစာရင်းပေါက် 2oz2အလွှာ PCB
Monolayer လူမီနီယမ်အခြေပြု 1ayer နျ Standard Alu ဘုတ်အဖွဲ့အဖြူရောင်မှင် PCB Heatsinks
2 အလွှာနျ Standard PCB TG170 ထူထပ်သောရွှေ ENIG 3U "အပြာရောင်မှင်လေ့လာရေးခရီးထုတ်လုပ်မှု